Nalain’ny jiolahy mitam-piadiana ankeriny tany Kaduna, Nizeria ireo ankizy mpianatra sy ilay mpampianatra azy ireo · Global Voices teny Malagasy
Mangina fotsiny manoloana ilay fakana an-keriny ny governemanta Nizeriana
Voadika ny 06 Oktobra 2020 5:08 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Swahili, Español, Igbo, Français, English
Ankizy mpianatra any amin'ny Fanjakan'i Kaduna, Nizeria. Sary avy amin'i Jeremy Weate, 15 Janoary 2010 tao amin'ny Flickr / CC BY 2.0.
Nanafika sekoly ambaratonga faharoa tany Kaduna, avaratra andrefan'i Nizeria ny 24 Aogositra lasa teo ny jiolahy mitam-piadiana ary namono olona iray sy naka an-keriny mpianatra miisa efatra sy mpampianatra iray, hoy ny tatitra nataon'ny mpampita vaovao Nizeriana, SaharaReporters.
Tonga tao an-tanànakely antsoina hoe Damba-Kasaya any amin'ny governemantam-paritr'i Chikun, Fanjakan'i Kaduna, ireo lehilahy mitam-piadiana, tokony ho tamin'ny 7:45 maraina, nitondra moto nanafika ny fokonolona aloha ary fantatra fa namono an'i Benjamin Auta, tantsaha iray, araka ny gazety an-tserasera Nizeriana Premium Times.
Avy eo dia niroso nankany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa Prince Academy ireo lehilahy nitam-piadiana ary naka an-keriny an'i Christianah Madugu, mpampianatra sy ny mpianatra miisa efatra: Favor Danjuma, 9 taona, Miracle Danjuma, 13 taona, Happy Odoji, 14 taona, ary Ezra Bako, 15 taona.
Nilaza tamin'ny Daily Trust, gazety Nizeriana mpivoaka isan'andro, ny rain'i Happy, Isiaka Odoji fa mangataka sorom-panavotana mitentina 20 tapitrisa naira (eo amin'ny 53.000 USD eo) ireo jiolahy mitam-piadiana mba hanafahana ny zanany – vola izay tsy ho hitan'izy ireo mihitsy.
Eo ampamaranana ny taom-pianarana amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ary teo ampanaovana ny fanadinana farany ireo mpianatra nalaina an-keriny. Noho ny valan'aretina COVID-19 dia ny mpianatra kilasim-panadinana ihany no navela hiverina an-tsekoly.
Na ny governemanta federaly na ny fanjakan'i Kaduna dia samy nangina manoloana ny mety hanjo ireo mpianatra nalaina an-keriny sy ilay mpampianatra azy ireo.
‘Andro mahazatra izany ao Nizeria’
Nolazain'ny mpisera Twitter Ndi Kato ho mandravarava izany ho an'ny firenena:
Nalain'ny jiolahy mitam-piadiana ireo ankizy kilasim-panadinana nantsoina hanohy ny fianarana indray androany tany amin'ny fanjakan'i Kaduna. Voalaza fa olona iray no novonoina. Namoy ny ainy ilay zazalahy kely. Ny hafa nentina ary mety tsy ho henontsika intsony ny momba azy ireo.
Tokony hanohina ny firenena izany …
Saingy mbola toy ny “andro mahazatra izany any Nizeria” io, mpampiasa Twitter Chima Chigozie:
Nisy ankizy mpianatra nalaina an-keriny tao Kaduna, novonoina ny iray tamin'ireo zazalahy mpianatra nandritra izany. Namoy ny ainy ilay zazalahy, matahotra ireo ankizy mpianatra. Tokony hanohina ny firenena izany kanefa TSIA, fa toy ny andro andavanandro eto Nizeria.
Nanakiana ny politika noho ny tsy fananan'ny vahoaka fangoraham-po sy hatezerana ho an'ireo ankizy mpianatra nalaina an-keriny i Jaja:
Ireo ankizilahy tao Kaduna nalaina an-keriny dia tsy hahazo fanohanana sy fihetseham-po tahaka ny zazavavy tao Chibok satria voalohany, zazalahy izy ireo, ary faharoa, tsy filoham-pirenena i GEJ.
Goodluck Ebele Jonathan (GEJ) no filohan'i Nizeria raha naka an-keriny zazavavy mpianatra miisa 276 avy amin'ny sekolim-panjakana ambaratonga faharoa ny milisin'ny Boko Haram avy any amin'ny tanàna avaratra atsinanan'i Chibok tamin'ny volana Aprily 2014. Nitarika ny hetsiky ny tenirohy manerantany #BringBackOurGirls (Avereno ny zazavavinay) izay nanakoako tamin'ny olona an-tapitrisany maro manerantany.
Vakio bebe kokoa:Mankalaza ny famotsorana ireo ankizivavy Chibok 82 nobaboin'ny Boko Haram ny Nizeriana [mg]
Tamin'ny 19 Febroary 2018, naka ankeriny zazavavy miisa 110 tao amin'ny Sekolim-panjakana ho an'ny zazavavy mandalina ny Siansa sy ny Teknika tao Dapchi, Fanjakana Yobe, avaratra atsinanan'i Nizeria ihany koa ny Boko Haram.
Read more:Ankizivavy iray toa maty tany am-pitazonan'ny Boko Haram azy [mg]
Miverimberina matetika ny fakana an-keriny ankizy mpianatra any Damba-Kasaya sy ny mpampianatra azy ireo.
Ny hany maha samihafa azy dia tsy ny Boko Haram tamin'ity indray mitoraka ity no tompon'andraikitra tamin'ilay tranga nahatsiravina fa ny jiolahy mitam-piadiana.
Ny habibian'ireo jiolahin'i Kaduna
Nirongatra ny herisetra ataon'ny jiolahy tany avaratra andrefan'i Nizeria, any amin'ny fanjakan'i Zamfara, Kaduna, Niger, Sokoto, Kebbi ary Katsina.
Nanamafy ny ACAPS, ny fikambanana mahaleo tena mpiaro ny zon'olombelona fa “tsy misy ifandraisany amin'ny fikomiana Boko Haram any avaratra atsinanana” ity herisetra mitam-piadiana ity:
Niatomboka tamin'ny adin'ny tantsaha sy ny mpiompy tamin'ny taona 2011 ny herisetra ataon'ny jiolahy ary nihamafy teo anelanelan'ny 2017 ka hatramin'ny 2018 ka nahitana halatr'omby, fakana an-keriny hanaovana takalon'aina, herisetra ara-nofo ary famonoana olona. Tamin'ny volana Martsa 2020, olona maherin'ny 210.000 no nafindra toerana anatiny.
Navela ho tsy afa-manoatra manoloana ireto jiolahy ireto izay namono olona miisa 1.126 farafahakeliny tany avaratr'i Nizeria teo anelanelan'ny volana Janoary sy Jona tamin'ity taona ity ny mponina ambanivohitra.
Ny tananakely any atsimon'i Kaduna no voa mafy indrindra, satria olona miisa 366 no novonoina nandritra ny tapaky ny voalohan'ny taona 2020, hoy ny Amnesty International.
Niaina andiana fanafihana milisy izay niafara tamin'ny famonoana, fakàna an-keriny ny Chikun LGA, tranon'ireo mpianatra nalaina an-keriny, “ary vondrom-piarahamonina miisa 45 no nafindra toerana sy nobodoina hatramin'ny taona 2019,” hoy ny Sendikam-bahoaka any Kaduna Atsimo.
Nanambara ny mponina any atsimon'i Kaduna fa mpiandry omby Fulani ireo jiolahy izay voairaka amin'ny fibodoana tany ary manaiky izany ankolaka ny governemanta federaly sy ny fanjakana.
Saingy nandà ny governoran'ny fanjakana Kaduna, Nasir El-Rufai fa tsy misy ifandraisany amin'ny fibodoana tany na noho ny antony ara-pivavahana sy ara-poko ny famonoana olona.
Tamin'ny 22 Aogositra, nanalefaka ny ora tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina manomboka amin'ny 6 hariva ka hatramin'ny 6 maraina ny governemantan'i Kaduna, izay nampiharina tany amin'ny faritra sasany ao amin'ny fanjakana mba hamehezana ny asan-jiolahy.
Na eo aza izany dia nitaraina i Luka Binniyat, mpitondra tenin'ny Sendikam-bahoaka any Kaduna Atsimo (SOKAPU) fa “mamono azy ireo ihany koa ny hanoanana satria tsy afaka mankany amin'ny toeram-piompiana izy ireo ary tsy afa-manoatra ny vahoakan'izy ireo.”
3 andro izayAfrika Atsimo